Waa maxay Fursadaha iyo caqabaha uu biyo-xidheenka wayn ee Ethiopia uu u leeyahay Somaliland ? – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Waa maxay Fursadaha iyo caqabaha uu biyo-xidheenka wayn ee Ethiopia uu u...
Waa maxay Fursadaha iyo caqabaha uu biyo-xidheenka wayn ee Ethiopia uu u leeyahay Somaliland ?
Biyo xidheenka ay Dawladda Ethiopia dhisanayso ee la magac baxay Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) oo xajmiga biyaha ee uu qaadayo lagu qiyaasay 10,200,000 m3, ayaa faa’iido iyo khasaaro u leh Somaliland. Haddaba haynu ku horayno faa’iidada dhaqaale ee ugu jirta Somaliland.
Maadaama oo ujeedada u wayn ee ay Ethioipia ka leedahay biyo-xidheenkani yahay in Ethiopia ay u iibgayso Korontada waddama ay jaarka la tahay, Somaliland-na ay kamid tahay wadama ay Ethiopia jaarka yihiin, Somaliland waxay ka faa’idaysan kartaa korantadaa hydro-electric power-ka ah, oo aad uga jaban korantada laga dhaliyo Shidaalka.
Ujeedda labbad ee Ethiopia ka leedahay Biyo-xidheenkan ayaa ah inay gaadho isku filnaanshiyo cunto, haddaba Somaliland oo ah waddan aan wax badan tabcan, anse ay ahayd inaynu wax badan tabcano, ayaa dhaqaale kasoo galaa canshuuraha ay ka qaado khudaarta ka timaada Ethiopia. Biyo-xidheenkan oo ay Ethioipia ugu talo gashay in Gu’u iyo Jilaalba wax soo saarkeedu yaraan – tani waxa ay kordhin doontaa khudradii Ethioipia innooga iman jirtay, taas oo kordhin doonta dakhliga canshuurta Somaliland kasoo gala.
Khudrada Ethioipia innooga timaada oo qiimaheeda kor-u-kac kuyimaado xilliga jiilaalka, ee Roobka Ethiopia ka da’a yaraado ayaa iyana qiimaheedu jabi doonaa, maadaaama oo khudaradu ku badnaan doonto suuqa.
Dhaqdhaqaaqa ganacsi buu kordhin doonaa, iyadda oo ay ka faa’idaysan doonaan ganacsatada yar-yar ( small traders).
Khasaaraha dhaqaale ee ugu jira Somaliland dam-ka.
Somaliland oo beeralaydu ay ka faa’iidaan xilliga ay soo go’odo khudrada waddanka gudihiisu ayaa waxa qiimo ridi doonta khudrada faraha badan ee Ethiopia inooga imadan doonta. Inkastooyna badnayd wax soo saarkeenna guduhu, haddana saamayn bay ku yeelan kartaa wax-soosaarkaa Ethiopia ee kordhay. Tan ayaa niyad jab ku keeni doonta beeralaydeenna guddaha.
Maadaama Ethiopia ay ugu talo gashay Biyo-xidheenkan inay isticmaalaan xilliga jiilaalka ee biyaha Wabigu yaraadaan, khudrada Ethioipia innooga imanaysa ayaa aad u badan tooda, taas oo in badan ka jabnaan doonta tii gudaha. Haddii ay siddani dhacdo qofka iibsadaha ahi innuu iibsado khudrada gudaha iyo ta Ethiopia, ta dibbada ayaa uga jabnaan doonta – tan ayaa sababi doonta in beeralaydu niyad jabto.
Somaliland, gaara ahaan wasaaradaha Beeraha iyo ganacsiga waxa la gud-boon inay siyaasad ka yeeshaan samaynta uu dam-kani ku yeelan karo wax-soosaarka Somaliland.
Dawladu waxay saamayn kartaa inay kor-u-qaado canshuurta xilliga khudaarteenna guduhu soo go’do, maadaama aynaan joojin karayn isku filnaasho gudaheenna ah awgeed, Somaliland-na ganacsigeedu u furan yahay cid walba.
Dawladdu waa inay biyo-xidheeno samayso oo ay xidho biyaha u qul-qulaya badda.
Maqaalka oo luqadda English-ka ku qoran baan intaas yar kusoo koobay. Akhriste adna waxaad hayso ku dar.
Waxaa qoray: Zakaria Ahmed.
Previous articleHORTA MA ISBEDEL BAA SOCDA MISE SHIRQOOL? HALKEESE AYAY SOMALILAND KAGA JIRTAA?
Next articleJabuuti waxa laga cabbaa biyo ay dhuumo kasoo qaadaan gobolka Shinniile ee dawlad deegaanka Soomaalida Ethopia
Diyaarad ku bur-burtay Dalka Kazakhstan